people Nepal » ‘नथिया’ उपन्यास सच्याएर बादीसँग माफी माग्न सरस्वती प्रतीक्षालाई सर्बोच्चको आदेश, सरस्वती प्रतीक्षाले मुद्दा हारिन् ! ‘नथिया’ उपन्यास सच्याएर बादीसँग माफी माग्न सरस्वती प्रतीक्षालाई सर्बोच्चको आदेश, सरस्वती प्रतीक्षाले मुद्दा हारिन् ! – people Nepal
Posted on March 4, 2019 March 4, 2019 by Purna Nanda Joshi
२० फाल्गुन , काठमाडौं । बादी समुदायको समस्या उठान गरेको भनिएका चर्चित कृतिमाथि बादी समुदायले नै आपत्ति जनाएपछि ती कृतिहरु अब संशोधन गर्नैपर्ने भएको छ ।
बादी अगुवाले माग गरेअनुसार नै सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको अधिवक्ता शशी बस्नेतले जानकारी दिइन् । उक्त आदेशको संक्षिप्त रुप पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
२०७५ मा क–कसका पुस्तक आउँदै छन् ?